नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : झट्ट हेर्दा यो सैन्य सहयोग नै देखिन्छ, यो सोझै अमेरिकी सरकारले गर्ने सहयोग पनि हो !
झट्ट हेर्दा यो सैन्य सहयोग नै देखिन्छ, यो सोझै अमेरिकी सरकारले गर्ने सहयोग पनि हो !
कानुनभन्दा माथि भयो भन्ने हल्ला फिँजाएर के हासिल हुने होला ? सम्झौता हुने नै विद्यमान कानुनअनुसार हो र यो सम्झौतालाई संसदले पारित गरेपछि यसको हैसियत 'डिफ़्याक्टो' कानुन जस्तै हुने हो । आफैले अनुमोदन गरेको सम्झौता बलियो हुनु भनेको कानुन कमजोर हुनु हो ? सम्झौता बलियो भएर के हुने हो त ? जे त्यसमा लेखिएको छ त्यही हुने न हो । अर्थात्, हाम्रा सांसद र मन्त्रीलाई दशै पेश्की दिनुपर्ने नियम लागू नहोला अरू त हुन्छ नै । त्यसमा कति समयमा कति काम कसरी सम्पन्न गर्ने भनेर लेखिएकै छ । कतिलाई त 'बौद्धिक सम्पत्ति' बारे पनि खास ज्ञान रहेनछ । लौ सबै बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको हुने भो, नेपाल त मूर्ख मात्रै बन्ने भो भन्ने पढ्न पाइयो । अमेरिकाले दिने पैसा हो, उसको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हक त उसैको हुन्छ नि । हामीले आइफोन किन्न सक्छौं । खोल्न र कसरी बनेको रहेछ भनेर बुझ्न पनि सक्छौं । तर खोलेर, डुब्लिकेट बनाएर बेच्न सक्दैनौं । हरेक सामान र सफ्टवेयरको बौद्धिक सम्पत्ति (intellectual property) माथि त एप्पलकै हक हुन्छ । हामीले किन्ने प्रोडक्ट मात्रै हो, त्यसको बौद्धिक सम्पत्ति होइन ।